प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावपछि प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने !
ARCHIVE, POLITICS » प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावपछि प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने !
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७५ सालसम्ममा तीनवटै तहको निर्वाचन गर्ने मनसाय बनाएका छन् । असोजअघि नै संविधान संशोधन गर्ने र त्यसपछि दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव गर्ने देउवाको तयारी रहेको छ ।
तीनवटै चुनाव कांग्रेस–माओवादी मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने आशयका साथ प्रचण्डसँग वार्तालाप गरेका देउवाले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको देउवानिकट स्रोत बताउँछ । यस विषयमा प्रचण्डले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । उनले पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्र यस विषयमा आफू बोल्ने बताएका छन् ।
स्रोतका अनुसार प्रचण्डले सकेसम्म यही वर्ष नै प्रदेश र केन्द्रीय चुनाव गर्नुपर्ने सुझाव देउवालाई दिएका छन् । तर, देउवाले भने कुनै पनि हालतमा यस वर्ष चुनाव गर्न सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिएको माओवादी स्रोत बताउँछ ।
यतिबेला संविधान संशोधनमा एमालेलाई मनाएर मधेसवादी दललाई खुसी पार्ने र संसदको म्याद थपि चुनाव सार्ने गृहकार्यमा देउवा छन् । काठमाडौं टुडेमा खबर छ ।
प्रकाशित : Saturday, July 08, 2017